Juni 2018 | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Juni 2018
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Izitimela eYurophu into enkulu; sithanda komzila yethu, futhi sizobe ukhethe kubo phezu nganoma uluphi uhlobo zokuthutha noma nini. Ngaphandle kokuthola ukusuka endaweni A kuya endaweni B kwaba nomshuduliswano, ngendlela ukhululekile futhi enokwethenjelwa, kukhona abaningi kakhulu…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi I Flam wesitimela kusukela Flam ukuba Myrdal kuthiwa omunye enhle kakhulu isitimela amade emhlabeni futhi singaqonda ukuthi kungani. Uhambo kuthatha ihora kuphela kodwa indawo ngempela umoya ukuthatha. Ungaphuthelwa lokhu nakho uma uvakashela…
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Uma une amasonto amabili ukuchitha eSpain, enye yezindlela ezingcono kakhulu yokwenza emhlabeni ukuhlola iSpain zemininingwane. ngeke nje lokhu zikuvumela ukubona nezindawo Amazing ezweni lonkana, kodwa isitimela sokuvakasha eSpain esebenza kahle kakhulu…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Umugqa omusha isitimela usethule, esehlanganise Azerbaijan, igalikuni, futhi Georgia. Umugqa luyasibekela 820 Angu futhi yokuhlala freights ngaphezu izitimela umgibeli. Okokuqala, umugqa Izoba ngeyokuqala ukuxhuma eYurophu nase China ngenkathi ngokudlula Russia. Isitimela sizosebenza kusuka…
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Kunezindlela eziningana iziteshi ezithakazelisayo futhi esebenzayo isitimela e-Spain. Uzothola high speed, ibanga naphakathi, lesifunda, travel wedolobha nehhotela-isitimela kulo lonke izwe. Kusukela iziteshi ezinkulu zanamuhla ezincane sizungezwe nemvelo, lezi izi 10 Isitimela Esithakazelisa Kakhulu eSpain…
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Budapest ngokuqinisekile nomnyombo wale Hungary. Kuyinto iphuzu elisemqoka uma kuziwa Kwekuheha ngu zemininingwane e Budapest kukhona izitimela eziningi bayayeka. Nakuba Hamba nge- zemininingwane e Budapest futhi ngokuvamile kuyajabulisa futhi ngokuvamile yinto entsha abantu abaningi,…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Okokuqala nje, kuyoba izitimela mahhala kuze kube 30,000 intsha kuleli hlobo. Isibalo amathikithi khulula kungase ngisho ukwandisa kuncike funa. I-EU ngaphezu kwalokho wamemezela ukuthi uzokwenza sipho atholakale intsha ephakathi kweminyaka eyi- 18 nangaphansi. Ngenxa ye…